Sipa kely haingana miaraka amin'ny holatra sy karaoty | Recipe ao an-dakozia
Maria vazquez | | Resipeo miaraka amin'ny holatra, Resety Stews sy lasopy
Manasa anao aho anio hanomana a lovia kelikely haingana sy mora. Fomba fahandro afaka omaninao ao anatin'ny 20 minitra ary ho lasa loharano tena ilaina hamitana ny menus isan-kerinandro ianao nefa tsy mandany fotoana be ao an-dakozia. Sipa kely miaraka amin'ny holatra sy karaoty, nomeko an'ity lovia mahafinaritra ity.
Mba hahafahako manomana an'ity lovia zana-borona ity haingana kokoa izay efa nampiasako sifotra am-bifotsy, fa raha tsy manahy momba ny fotoana ianao dia afaka mahandro azy ireo amin'ny fomba nentim-paharazana na amin'ny vilany haingana. Araka ny ho hitanao amin'ny dingana tsikelikely dia nanasa ireo sifotra am-bifotsy aho alohan'ny nanampiana azy ireo hanala ny sira be loatra, saingy tsy zavatra tokony hataonao izany.
Ny zavatra tsy maintsy hataonao amin'ity lovia ity mba hahazoana tsiro dia ny fanomanana fangaro tsara miaraka amin'ny tongolo, dipoavatra ary voatabia. Afaka mampiasa voatabia voajanahary ianao na raha haingana kokoa, dia miloka amin'ny voatabia voatoto am-bifotsy na voatabia nendasina mihitsy aza. Ny tenanareo! Hanomboka ve isika?
Ity lovia zana-pasika haingana misy holatra sy karaoty ity dia mety indrindra hamenoana ny sakafo isan-kerinandro. Tsotra, matsiro ary feno.
Tavoahangy masaka 1 nahandro
Sakay maintso 1
Pepper dipoavatra mena
280 g. olatra
Voatabia voatoto 1 vera
½ rano vera
Menaka oliva fanampiny.
Nopotsehinay ny karaoty ary nandrahoinay ao anaty vilany misy rano na microwave.
Mandritra izany fotoana izany dia katsentsika ny tongolo sy ny sakamalao. Raha vao voatetika, ny arotsaho ao anaty casserole misy menaka roa sotro fihinanana mandritra ny 8-10 minitra.
Raha vantany vao naka loko izy ireo, ampidirinay ireo holatra voatetika ary asio otrikaina minitra vitsivitsy amin'ny hafanana antonony.
Avy eo, ampio ny voatabia, ny paprika, rano antsasaky ny vera ary vanim-potoana hanandrana. Afangaroy sy mahandro minitra maromaro kokoa amin'ny hafanana antonony.
farany ampio ireo karaoty masaka voatetika ary sotro akoho. Afangaro ary avela handraho mandritra ny minitra vitsivitsy ny vay manontolo mba hamoahana ny tsiro.
Manolotra ireo sifotra haingana miaraka amin'ny holatra mafana sy karaoty isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » vilia » Resipeo miaraka amin'ny holatra » Sipa kely haingana miaraka amin'ny holatra sy karaoty
Mofomamy yaorta sy voasarimakirana